★★दुनियाका modern girlsहरु★★ |
Posted on जुलाई 24, 2015 by Padam Prasad Paudel	टिप्पणी छोड्नुहोस्
नत तिमीलाई modernization को defination नै थाहा छ !
न त तिमीलाई modern मान्छे कस्तोलाई भन्छन भन्ने नै थाहा छ !!
र पनि बिना सित्तैमा modernization को सान तिम्रो !
दुनियामा नपच्ने र संसारमा कतै नदेखेको modernization तिम्रो !!
modernization मान्छेको बिचार र काम गर्ने तरीकामा हुन्छ!
तर छोटो कपडाले नै modern बनाउछ भन्ने सोचाई तिम्रो!!
दुनियामा हिट बन्न र आफ्ना fan बढाउन,दुनियाले चर्चा गर्ने dressup तिम्रो!!!
देख्दा त कतिपय under18 देखिन्छन् होला!
र पनि धेरै त हैन एक दर्जन boyfriend तिम्रो !!
sunny leone को भन्दा पनि खतरा जवानी तिम्रो!!
हुन त तिम्रा हजारौ fan होलान !
र पनि तिमीलाई -ve attitudeले हेर्ने fan तिम्रो !!
दुनियाका ब्यक्तिको mood change गर्ने हेराई तिम्रो!
sunny leoneको भन्दा पनि खतरा जवानी तिम्रो!!
हुन त life का बिभिन्न परिभाषा होलान !
तर relax नै life हो भन्ने परिभाषा तिम्रो!!
तिमी हौनौ celebraty र पनि हजारौ fan तिम्रो!
दुनियाका केटाहरूको मुखमा झुन्डिने नाम तिम्रो!!
मैले पढेको थिए कपडाले मान्छेको skin protect गर्छ
तर बेग्लै रहेछ पढाई तिम्रो!
per day,per hour,per minute,per second change हुने style तिम्रो !!
तिमी हौनौ actor र पनि हरेक instant मा change हुने mood र बोलीको style तिम्रो!
तिम्रो actual voiceको frequency,quality,pitch थाहा नपाएका fan तिम्रो!!
हामीले facebookमा photo upload गर्दा पचास like पाच सात commentआउछ होला !
हजारौ like र सयौमा comment आउने photo तिम्रो
दिनदिनै change हुने profile pic तिम्रो!!
हामीलाई थाहा छैन तिम्रो बाबुआमाले कस्तो संस्कार दिएका हुन?
तर दुनियामा छाडा देखिने क्रियाकलाप तिम्रो!!
हावाले पनि उढाउने कपडा तिम्रो !
दुनीयामा hit हुन जे पनि गर्नुपर्छ भन्ने सोचाई तिम्रो !!
तिमी बोली नै यती मिठो बनाईदिन्छ्यौ कि !
दुनिया तान्ने magnetic attraction तिम्रो !!
केटाहरू युज गरी फाईदा लुट्ने बानी तिम्रो !
यसैमा set up भएको career तिम्रो!!
composed by ER D R POKHREL
Previous post ← अबको संबिधानमा यी कुराहरू पनि आओस
Next post Design →